वेलैमा चिनौँ स्तन क्यान्सर, नत्र हुन सक्छ यस्तो खतरा
काठमाडौं । मानव शरीरमा रहेका कोषहरूको वृद्धि र विभाजन शरीरको आवश्यकताअनुसार हुन्छ । तर, कहिलेकाहीँ स्तनमा अनावश्यक रूपमा कोष वृद्धि हुन थाल्छ । यस्तो हुँदा क्यान्सरको जोखिम हुन्छ । कोषमा आउने अनावश्यक परिवर्तनका कारण स्तनमा गिर्खा, गाँठागुठी, घाउ निस्कने हुन्छ । जसलाई स्तन क्यान्सर भनिन्छ । शारीरिक रूपमा कम सक्रिय हुनु, व्यायामसमेत नगर्ने भएका कारण स्तन क्यान्सरका बिरामीको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ ।
फोका उठ्नु स्तन क्यान्सरको पहिलो लक्षण हो । स्तनमा डल्ला आउँदैमा क्यान्सर भइसकेको भने हुँदैन । स्तनमा भेटिएको गिर्खा कडा हुँदै गएमा, नहल्लिने भएमा र बढ्दै गएमा स्तन क्यान्सरको लक्षण हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।यदि त्यो डल्ला सामान्य रूपमा चल्ने छ भने त्यो हाइड्रो एडिडोमाको लक्षण हो । जुन सामान्य उपचारबाटै निको हुन्छ ।
स्तनमा दाग देखापर्नु, मुन्टा भित्र जानु र छालामा निको नहुने घाउ आउनु आदि पनि स्तन क्यान्सरका लक्षण हुन् ।
सामान्यतया स्तनवरिपरि गिर्खा वा गाँठागुठी आएमा क्यान्सर नै भइहाल्ने हो कि भन्ने सोचिन्छ । तर, नरम गाँठा आउनासाथ क्यान्सर भइसकेको हुँदैन । वंशाणुगत गुण, जंकफुड खाँदा, मदिरा वा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्दा शरीरमा रोगसँग लड्ने क्षमतामा कमी आउँछ । अनि, क्यान्सर हुने सम्भावना रहन्छ ।
हर्मोनमा गडबडी आउनु, परिवार नियोजनको साधन पिल्सको अत्यधिक प्रयोग गर्नु वा जिनमा खराबी आएमा स्तन क्यान्सर हुन्छ । यस्तै, लामो समयसम्म बच्चालाई दूध नखुवाउनु, बाँझोपन तथा महिनावारी गडबडी पनि स्तन क्यान्सरका कारण हुन् ।
क्यान्सर भएको झट्टै थाहा नहुने हुँदा स्तनको नियमित जाँच गराइराख्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ । स्तनमा गाँठा देखिँदा महिनावारीको कारणले भएको हो भन्ने भ्रम व्याप्त छ । यस्तो भ्रम पाल्ने कारण स्तन क्यान्सर भएको ढिलो पत्ता लाग्ने गर्छ । अनि, रोग जटिल हुँदै जान्छ । तसर्थ, स्तनमा गाँठागुठी आएमा तुरुन्त चिकित्सककहाँ जान जरुरी छ ।
स्तन क्यान्सरको उपचार यसको आकार र अवस्था हेरेर हुन्छ । महिनावारी हुनुअघि र पछिका छुट्टाछुट्टै विधि छन् । शल्यक्रिया, केमोथेरापी, रेडियोथेरापी, हर्मोनल थेरापी तथा टार्गेटेड थेरापीबाट क्यान्सरको उपचार गर्न सकिन्छ ।
यौन सम्पर्कको बेला महिलाको योनीमा किन आउँदैन पानी ? यस्ता छन कारण
काठमाडौँ । यौनसम्पर्क गर्दा योनीमा पानी नआएकै कारण पुरुषलाई निकै कष्टकर महशुस हुने गर्दछ । जसले ग...
के तपाईको आँखामा आनो आएर तनावमा हुनुहुन्छ ? कारण र समाधानको उपाय यस्तो छ
काठमाडौं । आनो अर्थात् स्टाई आँखामा ब्याक्टेरियाको कारणले हुने संक्रमण हो । परेलामा रहेको तेल ग्र...
यी हुन् एन्टिबायोटिक औषधि प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा
काठमाडौं । कुनै पनि कीटाणु र ब्याक्टेरियाबाट हुन सक्ने संक्रमणबाट बच्न एन्टिबायोटिक औषधिको प्रयोग...
यसरकारण दुख्छ गर्भावस्थामा पेट
काठमाडौं । गर्भावस्था संवेदनशील अवस्था हो । गर्भावस्थामा महिलामा थुप्रै परिवर्तन देखापर्छन् । खा...
गर्मी मौसममा सरुवा रोगको सम्भावना बढी, सतर्कता अपनाउन डाक्टरहरूको सुझाव
काठमाडौँ । गर्मी मौसममा सरुवा रोगको सम्भावना अत्यधिक हुने भएकाले यी रोगबाट बच्न सतर्कता अपनाउनुपर...
देशका विभिन्न भागमा डेंगु रोगको प्रकोप बढ्दै, ‘खोज र नष्ट अभियान’ कागजमा
काठमाडौं । देशका विभिन्न भागमा डेंगु रोगको प्रकोप बढ्दै जान थालेको छ । एडिस एजिप्टाई जातको पोथी ल...